Ndekọ vidiyo dị oke mkpa maka ndị ahịa B2B | Martech Zone
Ngosipụta Vital dị mkpa maka ndị ahịa B2B
Nke a nwere ike ịbụ ihe nkiri vidiyo na-atọ ụtọ nke na-atọkarị ụtọ nke m lere anya B2B Ahịa. Ọ bụ ezie na a chịkọtara ọnụ ọgụgụ ihe karịrị otu afọ gara aga, ọ na-egosipụta nkọwa doro anya na etu esi eme ya ịzụ omume agbanweela azụmahịa na azụmahịa. Ọ na-enyekwa ọtụtụ ihe akaebe banyere etu na ihe kpatara ọdịnaya na mmekọrịta mmadụ na ibe ya ji dị mkpa na azụmaahịa B2B!
Businesseszọ azụmaahịa si azụ na-adịwanye mgbagwoju anya, yabụ anyị jụrụ ajụjụ: 'Nke a ọ bụ njedebe maka mkpọsa ọpụpụ?' Vidio anyị na-agbaso na-agbakọ na eziokwu niile na stats maka ndị na-ere ahịa iji wuo azụmahịa maka atụmatụ ahịa na mbupụ ahịa kwesịrị ekwesị. Ọbụna ọ na-egosipụta dinosaurs. Earnest
Isi isiokwu a na video a pụtara n'ụzọ kwụ ọtọ… agwa gị atụmanya, adịghị na-ere ha. Ikike ịre ere dị mfe karịa mgbe agụrụ akwụkwọ maka atụmanya gị - ọ bụghị naanị na ngwaahịa gị - kama ọ bụ ahụmịhe na ikike gị n'ime ụlọ ọrụ ahụ.
Lee ihe ndị a B2B Dị Oké Mkpa Statistics infographic:
Tags: ego nnwetab2b ahia ahiab2b ahia ahiab2b ahia ahiacontent Marketingahịa nnwetalaghachi azụmaahịaịgụ akwụkwọ ọchawhitepapers